त्यसैगरी उत्पादकत्वलाई मध्यनजर राख्दा देशको औसत ५ सय ९० के.जी. प्रतिहेक्टर छ । सबैभन्दा बढी मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ७ सय ३७ प्रतिहेक्टर के.जी. छ भने सबैभन्दा कम उत्पादकत्व भएको विकास क्षेत्र सुरपश्चिमाञ्चलमा ४ सय २९ प्रतिहेक्टर के.जी. उत्पादकत्व रहेको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा पूर्वी उच्च पहाडका ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभा जिल्लाहरुमा अलैंची खेती क्रमशः ३३८६, ५० र २२०५ हेक्टरमा गरिएको प्रस्तुत आँकलनबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै गरी सोही क्षेत्रमा सोही अवधिमा उत्पादन क्रमशः २१६५, ३० र ११६९ मे.टन. भएको अनुमान गरिन्छ । त्यसैगरी उत्पादकत्व भने सबैभन्दा बढी प्रतिहेक्टर ६४ के.जी. ताप्लेजुङ जिल्लामा भएको छ भने सबैभन्दा कम संखुवासभा जिल्लामा ५३ के.जी. प्रतिहेक्टर भएको अनुमान गरिन्छ ।